Masuuliyiinta Alshabab ee gobolka shabelaha Dhexe oo u hanjabey odayaal ku dhaqan Gobolka | Daafeet	Wednesday, October 26th, 2016	Home
Masuuliyiinta Alshabab ee gobolka shabelaha Dhexe oo u hanjabey odayaal ku dhaqan Gobolka
Jan 3, 2013 - Aragtiyood	Gudoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo warramayaa inuu u hanjabay Odayaal Dhaqameed ku sugan tuulada Masaajid Cali-guduud.
Kabo-ku-tukade oo tuulada gaaray ayaa sheegay inuu daba jooga qori uu la goostay nin ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab oo uu sheegay inuu ka soo jeedo tuuladacasino slot machine book of ra deluxe.
best casino online in canadaHorjoogaha wuxuu ka dalbaday odayaasha tuulada inay dib u soo celiyaan qoriga, ama uu ka qaadi doono tallaabo haddii ay ku guul-darreystaan inay si deg-deg ah ku soo celiyaan qoriga.
Qaar ka mid ah odayaasha loo hanjabay ayaa sheegay inaanay ka war qabin qoriga maqan, isla markaana aaney fulin karin dalabka horjoogaha ee la xiriira soo celinta qoriga uu Kabo-ku-tukade sheegay in lala baxsadaycasino site.
Fadlan Riix hoose hadaad tahay ilbaxaristocrat slot machine games for pc	casino games iicasino game internet virtualWARARKII KU DHAAFAY	Masiibo Hor Leh Kooxda Xag Jirka ee Daacish oo La Sheegey Iney la Wareegtey Degmada Qandala